Qubanaha » Xildhibaano lagu doortay Muqdisho.
Xildhibaano lagu doortay Muqdisho.
Doorashada Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa gabagabo maraya iyadoo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho saddex xildhibaan oo mid ka mid ahna ay ahayd dumar.
Iyadoo doorashadan ay maanta ka dhacday hoolka shirarka ee xarunta gaadiidka Booliska ayaa waxaa ku tartamayay musharaxiin ka soo jeeda gobolada Waqooyi iyadoo doorashadana ay ahayd mid ay musharaxiinta ku tartamaya aysan tartan adag gelin.
Kursigii ugu horeeyay ayaa waxaa ku guuleystey Maxamed Cali Xaggaa oo ku guuleystey 50 cod halka musharaxii la tartamayay Maxamed Iidle Kheyre uu ka helay hal cod oo qura. Kursiga labaad ayaa waxaa ku guuleystey Saynab Maxamed Caamir oo heshay 48 cod halka musharaxii la tartamayay Saynab Axmed Boqorre ay ka heshay 3 cod.
Kursigii saddexaad ayaa waxaa ku guuleystey Maxamed Cabdullaahi Kaamil isagoo helay konton cod halka musharaxii la tartamayay Jibriil sacad Muuse uu ka helay 1 cod.
Doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa maraya heer dhamaad ah iyadoo hal xildhibaan oo ah kuwa ka soo jeeda gobolada Waqooyi aan weli la doorin, sidoo kale waxaa weli la dhowrayaa in ay dhacdo doorashada shan kursi oo hore ay guddiga xalinta khilaafaadka u soo celiyeen.